किन झमझमाउँछ हात, खुट्टा र शरीर ? - IAUA
ramkrishna December 24, 2016	किन झमझमाउँछ हातखुट्टा र शरीर ?
जोकोहीको पनि हातखुट्टा या शरीरका विभिन्न भाग कुनै समय झमझमाएकै हुन्छ । कहिलेकाहीा कुनै भाग झमझमाउनु त सामान्य हो । तर, बारम्बार झमझमाइरहन्छ भने तपाईंमा केही न केही समस्या छ भन्ने कुरा सम्झनुपर्छ । हातगोडा खुम्च्याएर बस्दा या कुनै अंगमा कसिलो गरी बााधिादा त्योभन्दा तलको भाग झमझमाउनु सामान्य हो । खुट्टा सीधा पार्दा या बााधिएको चिज खोलेको केही समयमा नै ठीक हुन्छ । नदोब्य्राई या नबाँधी पनि बारम्बार झमझमाउने या निदाउने गर्दछ भने यस्ता समस्या हुनसक्छ :
शरीरमा चिनीको मात्रा नियन्त्रण भएन भने पनि हातगोडा र शरीर झमझमाउने गर्दछ । यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिएन भने हात र खुट्टामा वा हात र खुट्टाका औँलामा जाने स्नायुतन्त्रमा क्षति पुग्न जान्छ । ती तन्त्रमा क्षति पुग्दा स्नायुमा सूचना जान पाउँदैन र निदाउने/झमझमाउने हुनसक्छ । जब हात र खुट्टामा स्पर्श चेतना हुँदैन, तब पोलिने, लड्ने र ती अंगमा अरू चोटपटक लाग्ने सम्भावना बढी हुन्छ ।
पिउने पानीमा आवश्यक तत्त्वहरूको घटीबढीले पनि हातखुट्टा झमझमाउने समस्या हुन्छ । पानीमा हुने मिनरल्स, फोस्फोरस, क्याल्सियम, सोडियम, आर्सेनिकको सन्तुलन भएन भने त्यसले नसामा असर गर्छ । हाम्रो देशका तराई क्षेत्रका मानिसमा नसाको समस्या बढी देखिनु पनि त्यहाँ हुने अत्यधिक मात्रामा आर्सेनिकको कारण हो ।
हात, खुट्टा, ढाड, घाँटी कुनै स्थानको नसा च्यापिएमा पनि झमझमाउने या निदाउने समस्या हुन्छ । यस्तो समस्या विशेष गरी ढाडको हाडले नसा च्यापिँदा, हात, खुट्टा च्यापिँदा या लामो समय दोब्य्राएर बस्दा नसा च्यापिएर हुने गर्छ ।
झमझमाउने या निदाउने कारण पत्ता लगाउनुपर्छ ।
कारण पत्ता लगाइसकेपछि सम्बन्धित रोगका चिकित्सककहाँ गएर उपचार गर्नु राम्रो हुन्छ ।
कसिला कपडा नलगाउने ।
नसालाई क्रियाशील बनाइरहन नियमित रूपमा व्यायाम गर्ने ।
धुम्रपान र अत्यधिक मादक पदार्थ सेवन नगर्नु ।
मधुमेहमा रगतमा भएको चिनीको स्तर नियन्त्रणसँगै व्यायाम र नियमित परीक्षण गर्ने ।
यदि गम्भीर किसिमको निदाउने तथा झमझमाउने समस्या छ भने चिकित्सकसँग सल्लाह लिई नियमित फिजियोथेरापी गर्नु राम्रो हुन्छ ।
Previous Previous post: भित्री बस्त्र विना नै खिचिएका सोनमका तस्विरहरु किन सार्वजनिक भए
Next Next post: खुट्टा दुख्नुको प्रमुख कारण बढ्दो उमेर तथा मोटोपना